त्यहाँ तपाईहरु लड्नुहोस, यहाँ हामी लड्छौं – YesKathmandu.com
सांसद,नेकपा एमाले ८
अहिले, मधेसी दलभित्र मात्रै होइन । विधेयक दर्ता गराउने सत्तारुढ दल माओवादी पार्टीभित्र नै एकरुपता छैंन । प्रचण्ड सरकारमा सहभागी भएका मन्त्री र अन्य नेताहरुले स्वीकार्नु भएको छैंन । भने, अर्का सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस पनि त्यहि अवस्था छ ।
सवैभन्दा ठूलो शक्ति नेपाली जनता हो, प्रदेश नं.५ का जनताहरुको आवाज नैं नसुनेपछि संविधान संशोधन कसरी हुन्छ ?’ प्रचण्डले प्रधानमन्त्री हुँ भन्दैमा संविधान संशोधन हुँदैन । दुर्भाग्यवश, यो गर्नुभयो भने देशका लागि गद्दार काम हो । उहाँले यस्तो गद्धारी गर्नुहुँदैन भन्ने लाग्छ । अर्काे पाटो, उहाँले आफ्नै पार्टीका सांसदहरुलाई समेट्न सक्नु भएको छैंन । आफ्नै पार्टीबाट यस्को विपक्षमा आवाज उठिरहेको छ । सवैभन्दा ठूलो शक्ति जनता हो । जनताबाट निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरुलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हेरेका छैंनन् ।
नेकपा एमालेले त संस्थागत निर्णय नै गरिसकेको छ । कुनै हालतमा संविधान संशोधनको पक्षमा उभिने छैंन । हामीलाई दैनिक विभिन्न प्रदेशबाट फोन आईरहेका छन् । के भैंरहेको छ सिंहदरबारमा ? यहि छ प्रश्न, हामीलाई । त्यसैले उहाँहरुको विरुद्ध हामी संविधान संशोधनमा सहमति जनाउन सक्दैनौं । हामीले आफ्नो प्रदेशको बारेमा बोल्न नपाउँने यो कस्तो गणतन्त्र हो ? यहि प्रश्न उहाँहरुले बारम्बार गरिरहनुभएको छ । हामीले निडरका साथ भनेका छौं । त्यहाँ तपाईहरु लड्नुहोस यहाँ हामी लड्छौं ।
त्यसैले पहिलो कुरा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता पछाडि सत्तारुढ दलहरुबीच किचलो छ । चौतर्फी विरोध हुँदा समेत प्रधानमन्त्री प्रचण्डले किन यसमा अग्रसरता देखाउनु भयो बुझ्न सकिएको छैन । उहाँको मनको कुरा बुझ्न त सकिँदैन । तर बाहिर सरसर्ति हेर्दा जुन तत्वले संविधान जारी गर्न दिएको थिएन । त्यहि तत्वले अहिले बनिसकेको संविधान कार्यन्वयन गर्न दिइरहेको छैंन । चुनाव हुन्छ । तर देशमा अशान्ति र अस्थिरता कायम छ । देश टुक्राउने खोज्ने जुन भित्रि तत्व हावी छ । त्यसैले यहाँ मुख्य देशी विदेशी तत्व महत्वपूर्ण छ । यहाँ स्वार्थको खेल भैंरहेको छ । राष्ट्र र राष्ट्रियता विपरीत कार्य हुँदैछ । त्यसैले व्यक्तिगत स्वार्थको खेल हुँदैछ । त्यो स्वार्थ एमालेले कदापि सफल हुन दिने छैन । राष्ट्र बचाउने होइन बेच्ने काम हुँदैछ ।
एमालेले संस्थागत निर्णय गरिसकेको छ कि संविधान संशोधन हुँदैन । कहाँ के भएको छ र संविधान संशोधन गर्नुपर्ने त्यसको कुनै औचित्य देखिएको छैंन । ५ नं. प्रदेशका सवालमा एमालेले त्यसको नेतृत्व नै गर्छ । के गर्नुपर्ने हो ? राप्रपा होस् या अन्य साना ठूला दल ल्याएर संविधान संशोधन गरेपनि यहिँ प्रश्न छ ? कहाँ के भएको छ ? यदि जर्वजस्ती संविधान संशोधन पास गर्नु भो भने पनि त्यो दिन सम्म जोड घटाउको काम देखिहालिन्छ नि । यो ख्याल गरौं यतिञ्जेल सम्म एमाले सुतिराख्छ त ?
प्रस्तुति : लोकराज रुम्दाली राई
दलको सहमतिविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट